I-China Suction-Evacuation Access Sheath yoSetyenziso oluNye lwefektri kunye nabavelisi | Kangyuan
• Sombulula iingxaki zokuhamba kwelitye le-uric kunye nokuhamba kwakhona ngokupheleleyo, Phantsi koxinzelelo olubi, inokukuphepha ukubuyela umva kwelitye, ukuthintela intshukumo yelitye kunye nokususa ilitye ngokufanelekileyo.
•Sombulula iingxaki zokuhamba kwelitye le-uric kunye nokuhamba kwakhona ngokupheleleyo, Phantsi koxinzelelo olubi, inokukuphepha ukubuyela umva kwelitye, ukuthintela intshukumo yelitye kunye nokususa ilitye ngokufanelekileyo.
•Nciphisa uxinzelelo oluphezulu lwamathambo e-renal ngokufanelekileyo, Ukunkcenkceshela okuqhubekayo okwangoku ukutsala, kunokwenza ukujikeleza okungalawulekiyo kolwelo ukunciphisa uxinzelelo oluphezulu lwethambo le-renal ngokufanelekileyo.
•Inokuthintela ukopha ukugcina umbono ocacileyo ngexesha lokusebenza. Phantsi kokunkcenkceshela okuqhubekayo kunye nokufunxa, inokucoca ubofu, ihlwili legazi kunye negrabile, ugcine utyando lwenziwe ngombono ocacileyo, uqinisekise ukhuseleko lomsebenzi, kwaye unciphise ixesha lokusebenza.
•Yandisa ukungqinelana kokufikelela kwireterta ngokufanelekileyo ukuqinisekisa ukuba umsebenzi wenziwa ngokutyibilikayo, Uyilo lwesicoci esincamathelisiweyo esenziwe nge-AQ hydrophilic camera sinokwandisa ukuqiniswa kokufikelela kwireterta ngokufanelekileyo.
•I-sheath kunye ne-dilator tip zi-AQ hydrophilic camera. Ubungqingqwa be-hydrophilic ubukhulu bale mveliso ngu-0.03mm kuphela. I-COF ngumndilili we-0.050 ngovavanyo oluphindaphindiweyo lwe-frithion. Iziphumo zingaphezulu lee kuneemveliso ezifanayo.
•Ipaseji yokutsala uxinzelelo olubi inokudityaniswa nesixhobo esibi sokutsala isixhobo kumbhobho womoya okanye umbhobho odibeneyo wombhobho wokungenisa umoya.
•Iplagi yokutywina i-abicah, kulula ukusebenza.
•Kuyinto elula kwaye kulula ukuba bahlanganise ngokudibeneyo esingxotyeni ityhubhu kunye ngokudibeneyo ityhubhu ukwanda kunye.
•Uxinzelelo olubi olulawula umngxunya, ulungelelanise uxinzelelo lokufunxa.
•Umzimba webhubhu uphawulwe ngezikali, umbala ucacile kwaye uyahluka. Inokunceda ugqirha ukuba agwebe umgama phakathi kwentsimbi kunye nomchamo ngendlela ethe ngqo nengcono.
•Umphezulu womzimba wetyhubhu ugqunywe nge-AQ hydrophilic coating, egudileyo, ukukhuhlana kuncinci, ixabiso eliphakathi lomkhosi we-COF ngu-0.050, kwaye kulula ukwandisa ukukhanya ngokusebenzisa icandelo elimxinwa, ukunciphisa ukonzakala nokungabi nazintlungu.
•Qhagamshela kunye netyhubhu yolwandiso kakuhle.
•Isalathiso sesikhwama sihamba kakuhle ukukhusela ukulimala kwe-urethral.
•Incam ye dilator zi-AQ hydrophilic camera. Uyilo lwengcebiso yetaper. Inokwanda ngokuthe chu ngokuxubana kunye nokukhutshwa ukuba kwenziwe amajelo ogqirha apheleleyo kwaye aqhelekileyo, kulula ukusebenzisa i-ureteroscope eguqukayo, ikhusele i-ureter ngexesha lokutshintshiselana ngezixhobo ngexesha le-ureteroscopy.
Egqithileyo Ukufunxa iCatheter
Okulandelayo: Abicah esiswini Tube
ukufunxela ukuphuma ngobuso
I-Dilator ebonakalayo kunye ne-Suction Sheath
Ukubulawa Ukuphefumla Imijikelezo